Sida loo dayactir -
Rabshado iyo dhibaatooyin halka ciyaaro videos on VLC Player? Ha u qabaa xun sida VLC Player waa ciyaaryahanka ugu fiican oo dhan cayn kasta oo ka mid ah filimka kororsi ah iyo meesha ugu isticmaalaan tirada ugu badan ee dadka adduunka oo dhan.
Qeybta 1: Waa maxay sababta media player VLC tuso kaliya shaashad madow marka videos way ganaax?
Qeybta 2: Sida loo xaliyo "flv vlc ma video"?
Qeybta 3: Wondershare Video Converter Ultimate; Xalka Ultimate The
Qeybta 1: Waa maxay sababta media player VLC tuso kaliya shaashad madow marka videos way u wanaagsan?
Haddii aad haysato dhibaatooyin ka, la xiriira shaashadda madow xitaa marka videos waa ganaax, dhibaatooyinkii la xiriira codecs ah. Xitaa goob ku dahaadhaa qaldan sidoo kale badanaa waxay ku siineysaa in aad a video shaashadda madow, xitaa iyadoo cod ah si fiican u shaqeeya. Sababta kale waxaa laga yaabaa in ay Video Output la dedejiyey. Hawlaha aan habboonayn ee VLC ama version dhacsan ee software-ka waa sabab kale oo shaashadda madow in ay u muuqdaan iyo sidaas, baahida loo qabo waxaa laga yaabaa in ay u cusboonaynta.
Qeybta 2: Sida loo xaliyo "vlc Flv video maya"?
Xaaladdan oo kale, VLC FLV video ma u muuqataa, oo dhan ee aad sameyn karto waa beddelidda ee faylka si qaar ka mid ah kordhinta kale oo ka la doorbidayo .avi waayo-aragnimo ugu wanaagsan ee la VLC Player. Waxa kale oo aad u cusbooneysiin karaa VLC ka Player ama xitaa waxaad isku dayi kartaa ka-rakibidda un ka mid ah isku mid ah iyo reinstallation ee VLC Player. Mararka qaarkood, kuwaas oo tricks yar oo aan caadi ahayn shuqulka hawsha u sameeyo loo baahan yahay.
Waxaa jira hal xal ka badan aad u la mid ah. Tag Tools in VLC Player iyo dooran aad rabtid. Markaas dooran Video iyo saar ah loo hubiyaa in "la dedejiyey video saarka (dahaadhaa)". Hadda kaliya isku day oo mar kale u ciyaari filimka, waxaad ka heli kartaa video socda ee sida haboon.
Eeg sawir loogu jiro sidii xal kor lagu soo sheegay.
Haddii VLC ma ciyaari karo qaar ka mid ah files FLV, ka dibna waxaan kuu soo jeedinaynaa in isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate sida Kaaliyaha ugu fiican VLC.
Qeybta 3: Wondershare Video Converter Ultimate: Xalka Ultimate The
Iyada oo sooc farsamada looga baahan yahay ugu yaraan, ugu Wondershare Video Converter Ultimate caddaynaysaa in la kala doorashooyinka u fiican, waayo, dadka haysta noocan ah dhibaato. Nashqadda sida OS taageerayaan: Windows NT4 / 2000/2003 / XP / Vista / 7, iyo Windows 8 (32 yara & 64 jajabkii), processor ee 750MHz Intel ama processor AMD, Free Hard Disk Space 100 MB ama in ka badan oo ka mid ah RAM 256 MB ama kor ku xusan, shuruudaha waa mid aad u hooseeya oo macquul tahay, waayo, dadka raadinaya si ay u helaan xal habboon ee file .flv ah.
Iyadoo Video taageeraya Wondershare Video Converter Ultimate sida Avi, Mp4, Mpg, Mpeg, Nut, H.264 , H.265 (Hevc), Nsv, Vob , MOV , Flv, Mkv , Mts / M2ts / TS / TP / Trp ( Avchd , H.264, VC-1, Mpeg -2 Hd), Ducooyinkii, TOD, DV, Wmv, ASF, 3gp, 3g2, Drm Mp4 , dhexena, Rmvb, Wtv, Ogv, Mxf, Vro, Tivo, iwm, fursadaha jira furan ballaaran dadka ka adduunka oo dhan inuu ka faa'ideysto adeegyada app cajiibka ah.
Iyadoo dhowr fursado kale oo laga heli karaa in dadka isticmaala ay, Wondershare Video Converter Ultimate ah siisaa dadka isticmaala ee la kala dooran karo sida Ultra HD Support, Streaming Media TV si sahal ah oo ku siinayaa dadka isticmaala ku qaladka free ah DVD -aragnimo. Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate, aad waayo-aragnimo Video hubin in ay gaaraan heer cusub!
> Resource > VLC > Sida loo dayactir ".flv faylasha ma soo bandhigeen video" isticmaalaya VLC Media Player?